ऐश्वर्या र आरध्या कोरोना मुक्त भएपछि अस्पतालबाट डिस्चार्ज
मुम्बई । बलिउड अभिनेत्री ऐश्वर्या राय बच्चन र छोरी आरध्या बच्चन सोमबार अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएका छन् । ऐश्वर्याको आमा छोरी सोमबार अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएको भन्दै अभिषेक बच्चनले ट्विटरमार्फत जा ...
अमिताभ भन्छन्, ‘बुबा ! अस्पतालको शून्यरातमा तपाईंको सम्झना धेरै आउँछ’
मुम्बई । भारतीय अभिनेता अमिताभ बच्चनले आफूलाई अस्पतालका एकान्त रातहरुमा बाबुको धेरै सम्झना आएको बताएका छन् । उनले अस्पतालमा बाबु हरिवंश राय बच्चनको कविता पढेर सुन्य रातहरु बिताएको जनाएका छन् । ...
सामाजिक सञ्जालमा अमिताभः ब्लगमार्फत अस्पताल बसाईको अनुभव सार्वजनिक
मुम्बई । कोरोनाभाइरसको संक्रमण भएपछि आफ्नो छोरासहित मुमबईस्थित नानावती अस्पताल भर्ना भएका बलिउड अभिनेता अमिताभ बच्चनको स्वास्थ्य अवस्था स्थिर रहेको अस्पतालले जनाएको छ। अमिताभ पुत्र अभिषेकसहित १५ दिनअ ...
मुम्बई । बलिउड महानायक अमिताभ बच्चनले एक युवतीले अस्पतालमा आफ्नो जीवनकै उज्यालो दिन बनाइदिएको बताएका छन् । विगत दुई सातादेखि कोरोना संक्रमणका कारण नानावती अस्पतालमा भर्ना भएका बच्चनले शनि ...
मुम्बई । करिब २ साता अघि कोरोना संक्रमण पोजेटिभ देखिएपछि मुम्बईस्थित नानावती अस्पतालमा भर्ना भएका अमिताभ बच्चन सामाजिक सञ्जालबाट आफ्नो अवस्थाको अपडेट गराइरहेका छन् । आफ्नो स्वास्थ्यप्रति ...
काठमाडौं । वरिष्ठ गीतकार डीपी दाहाल परिश्रमीले मायाको घरबार नामको म्युजिक भिडियो सार्वजनिक गरेका छन् । डिलाइटेड नेपालको प्रस्तुती रहेको गीतमा परिश्रमीले मायाप्रेमको कथा उजागर गरेका छन् । मर्मस ...
कोरोना नेगेटिभ रिपोर्टको समाचारप्रति अमिताभ भन्छन्, ‘यो खबर गलत र झुठ हो’
मुम्बई । बलिउड महानायक अमिताभ बच्चनले सञ्चारमाध्यममा आए जस्तो आफ्नो कोरोना रिपोर्ट नेगेटिभ नआएको बताएका छन् । विभिन्न सञ्चारमाध्यममा अमिताभ बच्चनको कोरोना भाईरसको पहिलो रिपोर्ट नेगेटिभ आएको र अब लगत् ...
अमिताभ कोरोना मुक्त, अभिषेक आज डिस्चार्ज हुँदै
मुम्बई । बलिउड महानायक अमिताभ बच्चनको कोरोना भाइरस संक्रमण रिपोर्ट नेगेटिभ आएको छ। त्यस्तै उनका छोरा एवं नायक अभिषेक बच्चन आज डिस्चार्ज हुने भएका छन् । उनमा अघिल्लो साता कोरोना पोजेटिभ देखिएपछ ...
अभिताभको स्वास्थ्य अवस्था स्थिर, अझै डाक्टरको निगरानीमै बस्नुपर्ने
मुम्बई । विश्वभर फैलिएको कोरोना भाइरसबाट संक्रमित भएका बलिउडका महानायक अमिताभ बच्चनका परिवारको स्वास्थ्य स्थिर रहेको जनाइएको छ । अघिल्लो साता कोरोना पुष्टी भएसँगै अभिनेता अमिताभ बच्चन र नायक अ ...
नयाँदिल्ली । कोरोना पोजेटिभ भएपछि अस्पतालमा भर्ना भएका भारतीय महानयक अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन र नायिका ऐश्वर्या राय बच्चनको स्वास्थ्यमा सुधार आएको छ । अघिल्लो शनिबार कोरोना पुष्टी भएपछि अमित ...
काठमाडौं । नेपाली लोकगीतका चर्चित गायक एवं सर्जक प्रकाश सपुतका माईला भाई कोरोना मुक्त भएका छन् । प्रकाश सपुतले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत आफ्ना माइला भाई रमेश वि.क.लाई कोरोना भएको र कोरोना मु ...
ऐश्वर्या र आरध्यालाई स्वासप्रश्वासमा समस्या, दुवै नानावती अस्पताल भर्ना
मुम्बई । कोरोना पोजेटिभ भएको ५ दिनपछि भारतीय सुन्दरी नायिका ऐश्वर्या राय बच्चनलाई छोरी आरध्यासहित अस्पताल भर्ना गरिएको छ । उनीहरुलाई श्वासप्रश्वासमा समस्या भएपछि अस्पताल भर्ना गरिएक ...
मुम्बई । कोरोना संक्रमणका कारण अस्पतालमा भर्ना भएका बलिउड अभिनेता अमिताभ बच्चनले शुभेच्छुकप्रति आभार व्यक्त गरेका छन् । अघिल्लो शनिबार कोरोना पुष्टी भएपछि नानावती अस्पतालमा भर्ना भएका अमिताभ ब ...
मुम्बई । भारतीय अभिनेता अमिताभ र नायक अभिषेक बच्चन एक सातासम्म अस्पताल बस्नुपर्ने भएको छ । कोरोना संक्रमण पोजेटिभ देखिए पनि अमिताभ बच्चन र नायक अभिषेक बच्चन गत शनिबार नानावती अस्पतालमा भर्ना भ ...
मुम्बई । भारतमा बढ्दै गएको कोरोना संक्रमणका कारण एकपछि अर्का बलिउडकर्मीहरु संक्रमित बनेका छन् । बलिउड महानायक अमिताभ बच्चनका परिवारमा देखिएको कोरोना संक्रमण पछि अनुपम खेरककी आमासहित दाजु भाउजुलाई कोर ...
अमिताभ र अभिषेक आमनेसामनेको क्याबिनमा, ऐश्वर्या र आरध्या भने घरमै उपचार गराउँदै
मुम्बई । कोरोना संक्रमण देखिएपछि भारतीय अभिनेता अमिताभ बच्चन र अभिषेक बच्चन एउटै अस्पतालको एउटै तलामा नजिक नजिक भर्ना गरिएको छ । शनिबार राती दुवैमा कोरोना संक्रमण पोजेटिभ रिपोर्ट आएपछि नानावटी अस्पता ...
मुम्बइ । बलिउड अभिनेत्री ऐश्वर्या राय बच्चन र उनकी छोरी आरध्या बच्चनलाई पनि कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएको छ। यसअघि बलिउड महानायक अमिताभ बच्चन र नायक अभिषेक बच्चनलाई पनि संक्रमण देखिइसकेको छ । ...
मुम्बई । अभिनेत्री रेखाको बान्द्रास्थित निवासलाई सिल गरिएको छ । रेखाको घरमा काम गर्ने एक सुरक्षाकर्मीलाई कोरोना पोजेटिभ देखिएपछि उनको घरलाई सिल गर्ने निर्णय गरिएको जनाइएको छ । भारतमा पछिल्लो दिनमा को ...
अनुपम खेरकी आमासहित दाइ भाउजु समेतमा कोरोना संक्रमण
मुम्बई । बलिउड अभिनेता अनुपम खेरको परिवारमा कोरोना संक्रमण देखिएको छ । खेरले आइतबार ट्विट गर्दै आफ्नी आमासहित परिवारका सदस्यमा कोरोना संक्रमण देखिएको जनाएका छन । दाई भाउजुसँगै बस्दै आएकी उनकी आमाले अ ...
काठमाडौं । हाँस्य कलाकार सन्दिप क्षेत्रीबिरुद्ध पर्सा प्रहरीमा उजुरी परेको छ । कान्तिपुर टेलिभिजनबाट प्रसारण हुने ब्यंग्यात्मक कार्यक्रम ‘ह्वाट द फ्लप’मार्फत मधेसी समुदायलाई होच्याउने, उड ...
काठमाडौ । कोरियोग्राफीबाट फिल्म निर्देशनमा हात बढाएकी निर्देशक रेनाशा वान्तवा राईको नयाँ फिल्म ‘आई एम ट्वान्टी वान’ आउँदो सन् २०२१ मा प्रदर्शन हुने भएको छ । निर्देशक राईले फिल्मको छायाँकन ...
काठमाडौं । पछिल्लो समय चर्चा बटुलिरहेकी गायिका श्रीषा कुवँरको आवाजमा कभर गीत ‘के यो माया हो’ बोलको म्युजिक भिडियो सार्वजनिक भएको छ । रोमाण्टिक भर्सनको यस गीत साँचो माया प्रेममा डुबिरहेका ...
काठमाडौं । चर्चित अभिनेत्री एवं मोडल मनिषा सापकोटाको अभिनित नयाँ गीत बजारमा आएको छ । करिब २ वर्ष अगाडिदेखि मोडलिङ सुरु गरेकी सापकोटा लकडाउनका बेलामा आफूले मोडलिङ एवं फिल्मी दुनियाका बारेमा स्वअध्ययन ...
काठमाडौँ । नेपाल फिल्म सोसाइटीले चलचित्र विकास बोर्डका नवनियुक्ति अध्यक्ष दयाराम दाहाललाई भेटेका छन् । दाहाललाई बधाई तथा शुभकामना दिनका लागि सोसाइटीका कृष्ण मल्लले नवनियुक्त अध्यक्ष दयाराम दाहालको का ...
तिर्सना बुढाथोकीको अर्को हर्कत, छाती छोप्न झण्डाको प्रयोग ! (भिडियोसहित)
ईटहरी । सामाजिक संजालमा बेलाबेला अश्लील हर्कत देखाउँदै विवादमा आइरहने मोडल तिर्सना बुढाथोकी फेरि विवादमा र आलोचनाको सिकार भएकी छन् । छोटो भिडियो साझेदारी साईट टिकटकमा नेपालको झण्डालाई अमर्यादित तवरले ...
रुपन्देही । सवारी दुर्घटनामा परी रुपन्देहीमा गए राति एक कलाकार तथा पत्रकारको निधन भएको छ । रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिका वडा नं ६ ड्राइभरटोल निवासी ३० वर्षीय कलाकार तथा पत्रकार कृष्णबाबु पाण्डेको आ ...
प्रज्ञा प्रतिष्ठानको वार्षिकोत्सव राष्ट्रिय कविता महोत्सव स्थगन
काठमाडौं । नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठानद्वारा ६३औं वार्षिकोत्सवका उपलक्ष्यमा ९ असारमा आयोजना गर्न लागिएको राष्ट्रिय कविता महोत्सव–२०७७ स्थगन गरिएको छ । प्रज्ञा–प्रतिष्ठानले एकसूच ...
काठमाडौं । अभिनेत्री मनिषा कोइराला र उनको परिवारको कोरोना टेस्ट गरिएको छ । भारतको मुम्बइबाट काठमाडौं आएपछि सेल्फ क्वारेन्टाइनमा बसिरहेकी मनिषा र उनको परिवारको कोरोना परिक्षणमा रिपोर्ट नेगेटिभ आएको हो ...
काठमाडौं । बलिउड अभिनेत्री मनीषा कोइराला अहिले काठमाडौंमा छिन् । उनी मंगलबार रूपन्देहीको बेलही नाका हुँदै नेपाल आएकी हुन् । मनिषा नेपाल प्रवेश गरेस“गै नेपाली सेनाको स्कटिङमा सोही दिन साँ ...
मुम्बई । कन्नड नायिका चन्दना गोडाले विष खाएर आत्महत्या गरेकी छन्। २९ वर्षीया चन्दनाले कर्नाटकको बेंगलुरुस्थित आफ्नै घरमा आत्महत्या गरेकी हुन्। प्रेमीबाट धोका पाएपछि चन्दनाले आत्महत्या गरेकी हुन्। आत् ...
भैरहवा । चलचित्र अभिनेत्री मनिषा कोइराला मंगलबार दिउँसो रुपन्देहीको सीमानाका भैरहवाको बेलहियाबाट नेपाल प्रवेश गर्दै राजधानी तर्फ लागेकी छिन् । अभिनेत्री कोइराला परिवारका सदस्यसहित बेलहिया नाकाबा ...
बोल्ड साम्राज्ञी । महंगी साम्राज्ञी । सपना (ड्रिम्स) की नायिका साम्राज्ञी । नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा महंगी नायीकाको छाप बनाएकी साम्राज्ञी राज्यलक्ष्मी शाह कहिलेकाहिँ विवादमा आउँछिन् । कहिले प् ...
काठमाडौं । बरिष्ठ गीतकार रत्नशमशेर थापाको निधन भएको छ । थापाको बिहीबार दिउँसो नर्भीक अस्पतालमा उपचारका क्रममा निधन भएको उनको परिवारजनले जनाएको छ । उनी ८१ वर्षका थिए । गीतकार थापाको ‘घुम् ...
काठमाडौं । लाइभ लोकदोहोरीकी ‘स्टार’ गायीका टीका सानुले रुकुममा कथित माथिल्लो जातिकी युवतीसँगको प्रेमलाई विवाहमा परिणत गर्नका लागि आप्mना १९ जना साथीहरुसहित हिँडेका नवराज वि.क.सहित ...
मुम्बई । विश्वभर महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरस भारतीय चलचित्रका निर्देशक करण जौहरको घरसम्म पुगेको छ । आप्mनो घरमा काम गर्ने २ जना कामदारमा कोरोना पोजेटिभ देखिएको करणले ट्वीटरमार्फत् सार्वजनिक ...